ပုံမှန်အတိုင်း နေထိုင်နေ ကြတာကို မြင် ရတော့ ဒီလူတွေ နဲ့ ဒီမိုကရေစီတန် ရဲ့လား လို့တောင် မေးခွန်း ထုတ်နေ မိတယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ မေမဒီ – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ပုံမှန်အတိုင်း နေထိုင်နေ ကြတာကို မြင် ရတော့ ဒီလူတွေ နဲ့ ဒီမိုကရေစီတန် ရဲ့လား လို့တောင် မေးခွန်း ထုတ်နေ မိတယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ မေမဒီ
ပုံမှန်အတိုင်း နေထိုင်နေ ကြတာကို မြင် ရတော့ ဒီလူတွေ နဲ့ ဒီမိုကရေစီတန် ရဲ့လား လို့တောင် မေးခွန်း ထုတ်နေ မိတယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ မေမဒီ
ဂီတလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိထားတဲ့ အဆိုတော် မေမဒီကတော့ ဖေဖော်ဝါရီလအစကတည်းက ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ တိုင်းပြည် အခြေ အနေ​တွေ​ကြောင့် ပြည်သူတွေနဲ့ အတူ ပူးပေါင်းပါဝင်ကာ တရားမျှတတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် ကြိုးစား ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မေမဒီက လူထု လှုပ်ရှားမှုကြီးမှာ တက်တက်ကြွကြွ နဲ့ အားသွန်ခွန်စိုက် အနုပညာရှင်မောင်နှမတွေနဲ့ အတူ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ မေမဒီက လက်ရှိမှာ ဆိုရင် (၅၀၅)ကဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူခြင်း ခံထားရတာ ကြောင့် သူမရဲ့ လုံခြုံရေး အတွက် တိမ်းရှောင်နေရတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်း အိမ်ကနေ ထွက်ခွာခဲ့ရတာ (၁)လကျော်ခဲ့ကာ မိသားစုနဲ့ လည်း အဆက်အသွယ် မရှိတာကြောင့် အားလုံး ကို သတိရကြောင်း ပြောကာ Cover song ဖြစ်တဲ့ အိမ်ပြေး သီချင်းကို သီဆိုထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ သူမရဲ့ Myday မှာ အဆင် ပြေလား မေးရင် အဆင်မပြေပါဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ရင်ဖွင့်ပြောဆိုလာတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။”ကျွန်မတို့ အဆင်မပြေဘူးဆိုတာ အသက်ပေးသွားရတဲ့ သူတွေနဲ့ အထဲရောက်သွားတဲ့ လူတွေထက်စာရင် မြူမှုန် လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ပေးဆပ်သွားရတဲ့ လူတွေရဲ့ အသက်တွေ ချွေးတွေ ကို အားနာတဲ့ စိတ်နဲ့ တာဝန်မကျေနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ နေနေတာ ဒီနေ့ထိ မပျော်နိုင်ပါဘူး အေးဆေးစွာ မနေနိုင်ပါဘူး ပုံမှန်တိုင်း နေထိုင်နေတဲ့ လူတွေကို မြင်ရလေ ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည်အနာဂတ်ဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ တန်ရဲ့လားလို့တောင် မေးခွန်းထုတ်နေမိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီနေ့ထိ အဆင်ပြေလား မေးရင် အဆင်မပြေပါဘူး….”ဆိုပြီး ရေးသား မျှဝေပေးလာ တာ ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိက ပုံမှန်အတိုင်း ဖြစ်သေးတာ မဟုတ်တာကြောင့် ပြည်သူတွေ သွေးမအေးသွားကြဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ…….
Photo Credit -May Madi FB Account
ဂီတေလာကမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြကို ရရွိထားတဲ့ အဆိုေတာ္ ေမမဒီကေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလအစကတည္းက ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ တိုင္းျပည္ အေျခ အေန​ေတြ​ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြနဲ႔ အတူ ပူးေပါင္းပါဝင္ကာ တရားမွ်တတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးစား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမမဒီက လူထု လႈပ္ရွားမႈႀကီးမွာ တက္တက္ႂကြႂကြ နဲ႔ အားသြန္ခြန္စိုက္ အႏုပညာရွင္ေမာင္ႏွမေတြနဲ႔ အတူ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့တာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။
အခုလို ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ ေမမဒီက လက္ရွိမွာ ဆိုရင္ (၅၀၅)ကျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူျခင္း ခံထားရတာ ေၾကာင့္ သူမရဲ႕ လုံၿခဳံေရး အတြက္ တိမ္းေရွာင္ေနရတာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။မၾကာေသးခင္ ရက္ပိုင္းတုန္းကလည္း အိမ္ကေန ထြက္ခြာခဲ့ရတာ (၁)လေက်ာ္ခဲ့ကာ မိသားစုနဲ႔ လည္း အဆက္အသြယ္ မရွိတာေၾကာင့္ အားလုံး ကို သတိရေၾကာင္း ေျပာကာ Cover song ျဖစ္တဲ့ အိမ္ေျပး သီခ်င္းကို သီဆိုထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ဒီေန႔မွာဆိုရင္ေတာ့ သူမရဲ႕ Myday မွာ အဆင္ ေျပလား ေမးရင္ အဆင္မေျပပါဘူးဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို ရင္ဖြင့္ေျပာဆိုလာတာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။”ကြၽန္မတို႔ အဆင္မေျပဘူးဆိုတာ အသက္ေပးသြားရတဲ့ သူေတြနဲ႔ အထဲေရာက္သြားတဲ့ လူေတြထက္စာရင္ ျမဴမႈန္ ေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ေပးဆပ္သြားရတဲ့ လူေတြရဲ႕ အသက္ေတြ ေခြၽးေတြ ကို အားနာတဲ့ စိတ္နဲ႔ တာဝန္မေက်ႏိုင္ေသးဘူးဆိုတဲ့ စိတ္နဲ႔ ေနေနတာ ဒီေန႔ထိ မေပ်ာ္ႏိုင္ပါဘူး ေအးေဆးစြာ မေနႏိုင္ပါဘူး ပုံမွန္တိုင္း ေနထိုင္ေနတဲ့ လူေတြကို ျမင္ရေလ ကြၽန္မတို႔ တိုင္းျပည္အနာဂတ္ဟာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ တန္ရဲ႕လားလို႔ေတာင္ ေမးခြန္းထုတ္ေနမိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီေန႔ထိ အဆင္ေျပလား ေမးရင္ အဆင္မေျပပါဘူး….”ဆိုၿပီး ေရးသား မွ်ေဝေပးလာ တာ ျဖစ္ပါတယ္။လက္ရွိက ပုံမွန္အတိုင္း ျဖစ္ေသးတာ မဟုတ္တာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ ေသြးမေအးသြားၾကဖို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါရေစ…….
Previous post မိုးလေဝသ နှင့် ဇလဗေဒ ဦးစီး ဌာန မှ မိုးလေဝသ ထုတ် ပြန်ချက်
Next post စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲနေတဲ့ ပြည်သူတွေ အတွက် မိတ်ဆွေတွေ နဲ့ စုပေါင်း ပြီး လှူဒါန်းမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပြန်တဲ့ ခန့်စည်သူ